बिजुली ड्रिल: छनौट प्रकार र विशेषताहरु
Homeliness, उपकरण र उपकरण
बिजुली ड्रिल - एक Multifunctional उपकरण। यो उपकरण संग फरक कठोरता, धातु र प्लास्टिक, ईटा र ठोस संग काठ मा प्वालहरू ड्रिल गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष नलिका प्रयोग गरेर यसलाई कस र स्क्रू, पलिश वोल्ट नट आदि खोल्नु वा मिक्सर रूपमा प्रयोग गर्न (मिक्सहरू जगाएर) सतह पीसने गर्न सम्भव छ।
कुनै पनि जस्तै उपकरण, बिजुली अभ्यास घरेलू (अवैतनिक) र व्यावसायिक एक ससर्त विभाजन छ। यस्तो विभाजन लागि आधारभूत मापदण्ड - मोटर शक्ति र अवधि। व्यावसायिक मोडेल लगातार सञ्चालनको 10 घण्टा किन्न सक्छन्, जबकि घरेलू - बारेमा मात्र4घण्टा (एक ब्रेक संग 15 को मिनेट काम, हरेक 45 मिनेट)। उच्च-बल सामाग्री बनेको सबै घटक र व्यावसायिक उपकरण को भागहरु, मूल्य असर गर्न सक्छ जो एक लामो सेवा जीवन सुनिश्चित गर्न। व्यावसायिक बिजुली ड्रिल अलग रूपमा धेरै शक्ति (600 वाट अधिक) (मूल्य धेरै पटक उच्च घरेलू embodiment छ)।
अभ्यास को प्रकार
सबै भन्दा साधारण र बारम्बार प्रयोग विकल्प - प्रभाव अभ्यास। तिनीहरूले फिर्ता र निस्कने को आन्दोलन द्वारा आक्रमण को रूप मा अतिरिक्त प्रयास प्रदान, परिक्रमण साथै छन्। ठोस वा ईटा को ड्रिलिंग लागि यो कार्य प्रयोग गर्नुहोस्। यो भंगुर सामाग्री (प्लास्टिक, plasterboard र यति मा। पी) काम गर्न आवश्यक छ भने, यो बन्द गरिएको छ। बिजुली ड्रिल कोण प्रयोग स्थानहरू पुग्न गाह्रो काम गर्न। यो कार वा एक समयमा आवश्यक छ फर्नीचर विधानसभा। निर्माण ड्रिल-Mixers प्रयोग मिश्रण मिश्रण लागि। आफ्नो विशेषता सुविधा - को सहायक ह्यान्डल को उपस्थिति, जो तपाईं इच्छित स्थिति गर्न चुच्चो संलग्न गर्न अनुमति दिन्छ। सामान्यतया, यी मोडेल एक तर्साउने काम छैन। बिजुली ड्रिल एउटा सानो क्षमता, साना वजन र आकार छ। अक्सर यो घरेलू मोडेल सानातिना मरम्मत सञ्चालन मा सहज छन्।
विद्युत ड्रिल को mains वा ब्याट्री बाट संचालित हुन सक्छ। ब्याट्री को मोबाइल संस्करण महंगा छन् र थप वजन फरक, तर तिनीहरूले छ शक्ति मूल्य को mains धेरै उच्च चालित मोडेल हुँदा, धेरै उच्च छैन।
कसरी चयन गर्न
सबै को पहिलो, तपाईंले उपकरण कति प्रयोग गर्नेछ निर्णय गर्न आवश्यक छ। आफ्नो व्यावसायिक गतिविधि ड्रिलिंग संग सम्बन्धित छ भने, यो एक शक्तिशाली मोडेल किन्न राम्रो छ। विद्युत ड्रिल मर्मत समयमा आवधिक कामको लागि आवश्यक छ भने, त्यसपछि यसलाई व्यवस्थापन गर्न र किफायती घर परिमार्जन एकदम सम्भव छ। यसलाई थप सुविधाहरू एक मोडेल किन्न बिना, आवश्यक छैन। सामान्यतया, कार्य एक धेरै उच्च गुणवत्ता क्षतिपूर्ति छैन को एक ठूलो संख्या को उपस्थिति, अन्यथा लागत prohibitive हुनेछ। आदर्श, यो प्रत्येक को लागि एक अलग उपकरण किन्न मनमोहक छ काम को प्रकार: - पेचकस, ड्रिल छेद - को स्क्रू कस गर्न बिजुली ड्रिल। समीक्षा बिल्डर्स स्पष्ट यस्तो सरल मोडेल धेरै लामो र धेरै कार्यहरु उपकरणहरू भन्दा राम्रो काम को एक विशिष्ट प्रकार प्रदर्शन भनेर संकेत गर्छ।
कसरी चयन गर्न र नियन्त्रण संग पनडुब्बी राम्रो पम्प स्थापना?
बिजुली वर्तमान जेनेरेटर: प्रकार, विशेषताहरु, आवेदन
रिले 220: उद्देश्य, सञ्चालनको सिद्धान्त, को प्रकार
एक घर एक बयलर कसरी चयन गर्ने? सर्वश्रेष्ठ बयलर: समीक्षा, मूल्यहरू विनिर्देशों, फोटो
आफ्नो हातमा एक स्लाइड गेट कसरी बनाउने?
सफाई पछि सफा र पानी पानी। पहिले र शुद्धीकरण पछि खानेपानी को तुलना
अवलोकन मोटरसाइकल Jawa 350 प्रिमियर
परीक्षक कसरी खेल्ने? परीक्षक को खेल को नियम
खतरनाक उत्पादन सुविधाहरु को दर्ता गर्नुहोस्। शब्द व्यावसायिक।
आधुनिकीकरण को तेस्रो टियर - यो एक वास्तविकता छ
सुँगुर पसल, सब्ज र बिना
अजरबैजान झण्डा र हतियार को कोट
रूस मा मृत्यु: कारण, अवस्था र तरिकामा डेमोग्राफिक अवस्था सुधार गर्न
मनोरञ्जन र Koktebel को समुद्र तटहरु
थिएटर "घर": इतिहास, मुग्ध पार्ने संगीतको, कम्पनी, ठेगाना, समीक्षा
बुना खरायो: आफ्नै हातले अद्वितीय खिलौने को उत्पादन
किन ओछ्यानमा एक बिरालो बकवास गर्छ: कारण र समाधान। कसरी बिरालो जुटाउने
Analogs "Cavinton": प्रयोगको लागि मूल्य र निर्देशन। "Cavintonum" के प्रतिस्थापन गर्न सक्छ? जो राम्रो छ: "Cavintonum" वा "Vinpocetine"?